Mid kamida xubnihii isbahaysigii 'Argagaxisa ladirirka' oo ku dhintay dalka Kenya.
Sunday September 19, 2021 - 08:40:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maalmo isku xiga waxaa geeriyooday laba kamid ah dagaal oogayaashii Mareykanka qandaraaska ugasoo qaatay ladagaallanka culimaa'udiinka soomaaliyeed.
Cabdi shukri oo xubin ka ahaa isbahaysigii loogu magac daray 'Argagaxisa ladirirka' ayaa shalay ku dhintay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Sida ay sheegeen dad ehel ka ah Cabdi Shukri waxaa kusoo booday xanuun aan wali lagaran, ninkan ayaa sanaddii 2005-tii Muqdisho uga dhawaaqay isbahaysi ashahaadda ladirir ah oo qandaraas kasoo qaatay maamulkii G.W Bush.
Jimcihii lasoo dhaafay ayuu magaalada Muqdisho ku dhintay Bashiir Raage Shiiraar oo kamid ahaa xubnihii isbahaysigaas ahaana jaasuus xiriir wanaagsan lalahaa sirdoonnada Mareykanka iyo Yahuudda.
Inta badan xubnihii isbahaysigan ayaa udhintay cudurro aan lagaran halka qaarkood ay ku baxeen gacanta Al Shabaab, kuwa dhintay waxaa kamid ah Max'med Qanyare Afrax, Ciise dheere, Bootaan Xaaraan kunaax, Bashiir Raage iyo Cabdi shukri.
Ururkii midowgii maxaakimta Islaamiga iyo shacabka Muqdisho oo iskaashanaya ayaa bartamihii sanaddii 2006 ku guulaystay in ay eryaan Isbahaysigii Argagaxisa ladirirka ahaa balse sanado kadib ayay dalka dib ugusoo laabteen iyagoo la socday ciidamada Xabashida Itoobiya.
Jeneraal Al Burhaan oo kala diray Golayaashii Xukuumadda dalka Suudaan.
5 katirsan ciidamada dowladda oo ku dhintay weeraro ka dhacay Sh/hoose.